Jarjumooyinka carqaladaha loogu talagalay dadka waaweyn, joornaalada 355
Dumarka fiidmeerka ah ee fiidmeerka ah ayaa ka tagi waayey xitaa kuwa ugu dakhliga badan. Waa wacan tahay in la qaato fiidkii xijaabku kaa caawin doono kartoonada dadka waawayn, oo aad ku daawan karto xitaa telefoon caadi ah. Ku raaxeysta madadaalada royal, saacadaha fiidkii ee shaqeyn wanaagsan oo abaalmarin leh.
Ugu weyn > Hentay > Ku dheji kartoomyada sawirada leh
Ka daawo sawirada jilicsan ee jilicsan ee telefoonkaaga gacanta
Maxaa kale oo ay u maleynkaraan oo ay musuqmaasuqi karaan, sida xadhigga 3d aysan u daboolin? Xilliga firaaqada wuxuu u wareegayaa sheeko qurxoon, markaad fadhiisanayso si aad u daawato kartoon qabow, loogu talagalay dhagaystayaasha dhageysiga weyn. Ku dheji fiidiyoow fiidiyow ah, waxaad ogaan doontaa waxa soo jeestay gabdhaha aan waxba galabsan ee walaalaha ah iyo walaalka, kuwaas oo ku soo noqday guriga. Meydadka ayaa rummaged hareeraha qolka caruur, qabtay gabdhaha by yaab, kor u qaaday dharkooda. Waa waqtigii si sax ah loo ciqaabi lahaa, ka hor inta dameerahaas ay ka muuqdaan sawirka, hadda waxaan haystaa laba. Dareemo ma ahan kuwa u jahawareer leh walaalka ladilay, way ku faraxsanyihiin dareenka taagan.
Walaal iyo walaashaa
Yaa sheegaaya in la ciyaarista gabdhaha walwalsan yihiin? Eeg sawirada jilicsan ee jilicsan oo hubso: fiidkii ee shirkada soo jiidata ee walaashaa yar ayaa noqon karta mid cajiib ah, waxay kuxirantahay rabsho. Sii diyaari fikrado, dareenka ayaa lagu soo bandhigi doonaa qaybo farxad iyo orgaani! Muusikada qaan-gaarka ah ee dadka waawayn ayaa ku haboon oo kaliya maaha inay daawadaan shabakadda, laakiin sidoo kale la soo dejiyo. Goobo qurux badan oo la qalajiyey si aad u argagax leh, waxaad doonaysaa in aad galmo la yeelato walaalkaa weyn, inaad soo jiidato riwaayad khiyaano ah oo cuncun leh, oo ku rajo weyn. Ka dib daawashada kartoonada, waxaad rabtaa inaad tagto ficilka!